Buqqaatota Gindhir: “Ramadaanni baranaa hedduu nutti ulfaate” – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsBuqqaatota Gindhir: “Ramadaanni baranaa hedduu nutti ulfaate”
Buqqaatota Gindhir: “Ramadaanni baranaa hedduu nutti ulfaate“
Namoota biyyuma isaanii keessatti qe’eerraa buqqa’an miliyoonaan lakkaa’aman kan qabdu Itoophiyaan ayyaana Iid Al Fixir bara 1440ffaa sirna ho’aan kabajjeetti.
(bbc)—Namootni qe’ee isaanii irraa buqqa’anii bakka biraa qubsiifaman ykn ammoo buufataalee yeroo keessa jiraniif garuu kabaji ayyaanichaa akka baran ho’aa miti.
Haguma bakki isaan jiran magaalaa guddoo biyyattii Finfinneerraa fagaachaa deemu ammoo rakkinni lammilee qe’ee irraa buqqa’anii hammaataa deema.
Magaalaa Lagaxaafoo keessa kanneen qubatan keessaa tokko kan ta’e dargaggoo Abdii, kabaji ayyaanicha kan bara darbeerra barana fooyyee akka qabu dubbata.
“Nutis barana xiqqashuu gadi dhaabbachaa waan jirruuf, ammoo namnis osoo amantiin wal hin qoodiin tokkummaa jabaan wal gargaaraa ture, haalaan namatti tola” jedha.
Achuma magaalaa Lagaxaafoo qubatee kan jiru dargaggoon Sa’iid jedhamus yaada wal fakkaataa qaba.
Hordoftoonni amantaa musliimaa naannoo Markaatoo wal gurmeessun sooma irrattis ta’e ayyaana irratti deeggarsa godhaafii akka turan dubbata.
Naannoo Somaalee irraa buqqa’anii magaalaa Baatuu qubatanii kan jiran Obbo Kormee Liyee kabaja ayyaanaa Iid Al Fixir baranaa irraa gammachuu qabaachuu dubbatu.
“Duraan hawaasni musliimaa cunqursaa keessa ture barana garuu nagaan, bilisummaan baanee sagannee galle, kun ayyaanicha adda isa taasisa” jedhu.
Erga qe’ee irraa buqqa’anii barana yeroo lammataaf ayyaana Iid Al Fixir kabajaa jiraachu kan himan Obbo Kormeen, akka enna qe’ee jirruu ta’uu baatus “uummanni jaalala nuuf qaba, nu deeggara, gammachuu irraa qabna” jedhu.
“Hedduu nutti ulfaate”
Yeroo dhihoo as hojiin tola-ooltummaa fi wal gargaarsaa kaka’umsa aanga’oota mootummaan hojjetamu aadaa wal gargaarsaa hawaasaa jabeessaa jira.
Wal-gargaarsi kun garuu magaalaa Finfinneefi jiddugaleessa biyyattii qofaatti daanga’uu hin oolle.
Gammoojjii Baalee aanaa Gindhir keessa buqqaatonni qubatanii jiran faallaa warra magaalota Lagaxaafoo fi Baatuu rakkoo jabduu himatu.
“Duraan sabaafi sab-lammii hedduu waliin kabajna turre, amma garuu warruma buqqaanee as jirru malee namni bakka biraati ayyaana nu waliin kabajuu dhufe hin jiru” jedhu Obbo Xaahir Mohaammad.
Ayyaana qofa osoo hin taane baatiin ramadaanaa baranaas hedduu nutti ulfaate jedhu.
“Duraan dalagannee waan silaa barbaannu bitannee, maatiifi ijoollee keenyaaf akka gaariitti waan barbaachisu godhaafi gammachuun kabajna turre.”
Kan baranaa garuu “bosona keessa nu qubachiisanii, namni dhufee nu gaafate hin jiru, dhaqnee qaama mootummaa dubbisnees furmaata hin arganne” jedhu.
Sooma keessas namni deeggarsa nuuf godhe hin jiru ammas baatii afuriif raashina osoo hin argatiin jirra jechuun buqqa’aan biraa achuma aanaa Gindhir irraa dubbifne BBC’tti himaniiru.
Rakkinni jireenyaa nutti jiraatus garuu jaalala namni walii qabu gaariidha, ollaa keenya wajjiin waanuma qabnu walitti qicnee jaalalaan waliin kabajuutti jirra jedhu Obbo Xaahir.
‘Qe’ee keenyatti deebi’uuf haalli nageenyaa nu yaaddessa’
Mootummaan namoota qe’ee irraa buqqa’anii bakkee jiran ariitiin qe’eetti deebisuuf hojjechaa jiraachuu hima.
Namoota miliyoona sadiitti siqan buqqa’anii bakkee jiran keessaa miliyoona 1.3 kan ta’an qe’ee isaaniitti deebi’aniiru jechuun torbee darbe Ministirri Nagaa Itoophiyaa Aadde Mufariyaat Kaamil gaazexeessitootaaf ibsa kennaniiru.
Dhaabbileen mirga namoomaaf falman tokko tokko mootummaan humnaan buqqaatota qe’eetti deebisa jira jechuun qeequ.
Mootummaan garuu guutummaatti fedhiin akka ta’eefi ulaagaa idil-addunya bifa eeggateen raawwachaan jira jedha.
Namootni qe’ee isaanii irraa buqqa’anii bakka biraa qubsiifaman ykn ammoo buufataalee yeroo keessa jiraniif garuu kabaji ayyaanichaa akka baran ho’aa miti.
“Akkuma yeroo darbe siif erge barattoonni Oromoo Debre Birhaan University birmannaa dhabanii barattoota Amaaraafi deeggartoota ABiN’tiin tumamaafi miidhaa gurguddaan irraan gahaa jira. Poolisiin Federaalaas galeera garuu tasgabbeessuu hin dandeenye. Barattoonni hedduun miidhamanii referii ta’aa jiru,,,,kaan mooraa lakkisanii galaa jiru. Sanuu shaanxaa gad hin baasan waan ta’eef harka duwwaa baqatanii galaa jiru. Dubbiin hammaate. Sababni walitti bu’insaa tokkolleen hin jiru garuu ABIN jibba Oromoorraa qabuuf jecha ijoollee qindeessee barattoota Oromoorratti duulchisaa jira. Habashaan quuftee dhiichisaa jirti. Mee sagalee haa taanuuf social miidiyaa irrattillee.”